Masar oo culays dhaqaale kala kulantay Markab xidhay gacanka Suez
Home WARARKA Masar oo culays dhaqaale kala kulantay Markab xidhay gacanka Suez
Masar-(Berberanews)-Laba kamid ah shirkadaha maraakiibta ee dunida ugu weyn ayaa sheegay inay ka baaraandagayaan qaabkii ay uga wareegi lahaayeen marinka Suez, kadib markii ay guuldaraysteen dedaallo lagu jiidayay markab xidhay kanaalkaas muhiimka ah.
Shirkadaha Maersk iyo Hapag-Lloyd ayaa qorsheynaya inay maraakiibtooda u weeciyaan dhanka marinka Cape of Good Hope ee cirifka koonfureed ee qaaradda Afrika, kaas oo kumannaan kilo mitir ka fog Suez, isla markaana ay todobaadyo ku gaadhi karaan maraakiibta ka gooshta.
Injineero ku hawlan inay markabka ka jiidaan meesha ayaa ku guuldaraystay dedaalladii ay wadeen.
Milkiilaha markabka Ever Given ee ku cadilmay marinka Suez, Shoei Kisen Kaisha ayaa raali-gelin ka bixiyay xaaladda taagan, waxaana uu sheegay inay ku dedaalayaan sidii loo furi lahaa marinka xidhmay.
Ever Given oo ka soo shiraacday dekad ku taal Shiinaha kuna sii jeeday Rotterdam, Netherlands, ayaa ku cadilmay qoorriga Suez isaga oo doonayey inuu galo badda Mediterranean.
Markabkan oo ka diiwaangashan Panama, isla markaana sida xamuul dhan 200,000 tan, ayaa Salaasadii fadhiistay meel muhiim u ah marinka Suez, waxaana hakaday isu socodka marinkaas xajmiga Ever Given awgii.
Xukuumadda Masar ayaa dib u hawgelisay marin qadiimi ah oo ku yaal Suez si ay u kala yareyso saxmadda maraakiibta.
Shilkan ka dhacay Suez-ka ayaa saameyn muuqata ku yeeshay suuqyada shidaalka caalamka oo durbadiiba sare u kacay boqolkiiba 6.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in maraakiib ka badan 30 ay u xanniban yihiin markabka jaray marinka Suez.
Sideed doonyood oo ah nooca jiida maraakiibta ayaa ku hawlan sidii ay Ever Given uga dhaqaajin lahaayeen halka uu ku xanibmay.
Khubarada ayaa ka digaya in hawshaas ay qaadan karto dhowr maalmood.
Ku dhawaad boqolkiiba 12 badeecadaha ganacsiga caalamka ayaa mara marinka Suez, oo isku xidha Mediterranean-ka iyo Badda Cas, ahna halka ugu dhaw ee ay uga kala gooshi karaan maraakiibta u kala socota Aasiya iyo Yurub.
Dr Sal Mercogliano, oo ah taariikhyahan ku xeel dheer arimaha baddaha ayaa sheegay in dhacdooyinka noocan ah ay nadir yihiin, balse saameyn xooggan ku yeelan karaan ganacsiga adduunka.
Ku dhawaad 19,000 oo markab ayaa sanadkii 2020 ka gudbay qoorriga Suez, taasoo ka dhigan in celcelis ahaan maalintii ay maraan 51 markab
Previous articleWasiirkii hore ee wershadaha Somaliland oo la xidhay
Next articleDad ku dhintay shil ka dhacay wadada Berbera iyo Hargeysa